Ibali lethu-iShanghai Copak Industry Co., Ltd.
I-Shanghai COPAK Industry Co., LTD, eyasungulwa ngo-2015, kunye neofisi yokuthengisa eShanghai kunye nefektri ehambelana nayo eZhejiang. I-COPAK ngumthengisi oqeqeshiweyo we-Eco-friendly yokutya kunye neemveliso zokupakisha zesiselo: Iikomityi ze-PET, iibhotile ze-PET, izitya zephepha, njl.
I-COPAK izama ukugcina iimveliso ezintsha zihlala zihlala zihamba kwaye zibonelela abathengi ngeemveliso ezifikelelekayo nezikumgangatho ophezulu. ICopak yokubonelela ngekomityi ye-PET kunye nebhotile ye-PET yayo yonke imiqulu, ukusuka kwi-1oz ukuya kwi-32oz, zombini zicacile kwaye ziyashicilelwa ngokwesiko. Njengomlingani omde kunye nomthengisi weqhinga kubathengi bethu, sizimisele ukuyila kunye nokuvelisa iikomityi kunye neebhotile ezinokuthenjwa, ezifanelekileyo nezesitayile.
Imigca ye-COPAK engenazintuli yeemveliso inezinto ezininzi ezilahlwayo kwindawo yokutya neziselo (iindawo zokutyela, ukutya okukhawulezayo, iivenkile zekofu, iinkundla zokutya, ivenkile enkulu kunye nokunye) kunye nabathengi bemakethi. Ezi ndebe kunye neebhotile zisetyenziswa kakhulu kwiziselo ezibandayo, isiselo, ikofu yomkhenkce, i-smoothies, i-bubble / iti ye-buba, i-milkshakes, i-cocktails efriziwe, amanzi, iisoda, iijusi. Iisosi kunye neoyile zomkhenkce.
Sibonelele ngeekomityi zePET kunye neebhotile zohlobo oludumileyo. Ngoku iimveliso zethu zibonwa kwihlabathi liphela. Nge-COPAK, abathengi baqinisekile ukuba banokukhetha okunokuthenjwa kunye nokuthenjwa, kwaye banikezela elinye lamaxesha akhawulezayo okuguqula imveliso kwiimveliso ezilahlwayo ngokwesiko.
Uthuli Iworkshop yasimahla
Umgangatho webanga lokutya
ICopak ihlala ijonge ukwakha ishishini lexesha elide kunye nomthengi. Umgangatho yingcambu, umthengi ngumgaqo. ICopak ihlala ithatha umgangatho kunye nenkonzo njengobomi, inikezela ngemveliso esemgangathweni kunye nenkonzo yokujonga ngentliziyo iphela.Sineqela lethu lobungcali le-QC kwaye sidlulisile izatifikethi ze-FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001.
EUmthengisi onoxanduva lokusingqongileyo:
ICopak ihlala ikhathalela ngendalo kwaye ilandela ngokuqinileyo imishini yokhuselo lokusingqongileyo. Kule mihla, iimveliso eziluhlaza zifumana ingqalelo yabantu. ICopak isebenzise ngakumbi izinto ezinobungozi kwindalo esingqongileyo, njenge-RPET kunye nePLA kunye nePhepha.Sijolise kuphuhliso oluhambelanayo phakathi kwendalo nendalo.
ICopak ikwanoxanduva lokunciphisa uxinzelelo kwingqesho, ukukhuthaza abasebenzi, ukukhokelela ekuzenzeni ngokwakho, nokwenza igalelo eluntwini. Sijonge ukuqonda umanyano oluhambelanayo lweshishini, abasebenzi kunye noluntu.